Nne nke akuko omuma niile | Martech Zone
Wednesday, July 22, 2009 Sunday, Eprel 24, 2016 Douglas Karr
Chei, nne nke ọdụ data niile. Internous bụ ụzọ iji katalọgụ ma hazie ọdụ data niile dị n'ụwa. Mgbe Matt buru ụzọ gwa m ihe ọ na-arụ ọrụ na ya, anya m na-enwu gbaa karịa n'ihi oke ebumnuche ahụ.
Site Internous n'Sitentanet:
Nọmba Ọnọdụ Nchọgharị Ntanetị (ISEN) bụ maka ndị na-eme nchọpụta na-esiri ike ịchọta na ịchọ mkpa, ọdụ data dị n'ịntanetị. ISEN bụ ntọala nke ọnụ ụzọ na -ejupụta ọdụ data nke Intanet. N'adịghị ka Yahoo ma ọ bụ Google na ọnụ ụzọ ndị ọzọ na ntinye isiokwu nke otu akụkụ nke ebe nrụọrụ weebụ na-agbanwe agbanwe, ISEN na-elekwasị anya na nchịkọta data ọdụ data. ISEN na-akwado nnweta ma na-agbakwunye uru site na ịmepụta ahụmịhe searchntanetị na-arụ ọrụ nke ọma.
Tags: katalọgụ katalọgụnchekwa data ịntanetịinternousisenmatt theobald
Web Design: Ọ bụghị banyere gị
Aha ya bụ Matthew Theobald
Sep 17, 2009 na 3:35 PM
Anyị achọwo ego IARPA site na onyinye site na Dartmouth College na Harvard ọba akwụkwọ ahụike. Nye ya ọnwa abụọ ma anyị kwesịrị ịma!